အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Waka Waka ရဲ့ မူလအစ
42 Responses to “Waka Waka ရဲ့ မူလအစ”
သီချင်းကို နားထောင်ပြီး နည်းနည်းတော့ ရယ်မိတယ်၊ သူတို့ သီချင်းက ကျနော်တို့ နားအတွက်
ဟာသလို ဖြစ်နေလို့၊ စပိန်ပရိတ်သတ်ကြီး စပိန်အသင်းအတွက် ဆုတွေ တောင်းနေတယ်ပေါ့။
အစ်မရေ...waka waka နဲ့လမ်းအတူတူ လျှောက်သွားပါတယ်။ အမလေး မောထှာ :)
သူများရေးမဲ့ဟာကြီးကို လက်ကမြန်လိုက်တာတအားဘဲ ၊ ဒီက ကမ္ဘာဖလားဆုပေးတဲ့ညကျရင်ရေးမယ် ပေါ့အခုတော့ဖက်ပြီးပြန်သွားရပြီ ၊ ဒါပေမဲ့ချောရေးတာပိုပြည့်စုံပါတယ်..........
ကျေးဇူး ပါပဲ ဗျာ။
ရှားရှားပါးပါး တင်ပြ ပေးတာ..။
သိပါဘူး မမချောရယ် သစ်ကလေ kawa kawa က စတာလားလို့...ဟိ
အော် ရာဇ၀င်လေးနဲ့ကိုး။ ဒီလို အမျိုးသားတွေ ဆိုတာလည်း နားထောင်ကောင်းတာပဲနော်..။ ဟုတ်ပ သူတို့ သီချင်းနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ရတာ ပျော်မောလေးတောင် ဖြစ်သွားတယ်း)))
Waka Waka ကို ကိုယ်ဟာကို ဝေါလ်ကပ် ဝေါလ်ကပ် (world cup world cup) လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်
သီချင်းကို နားထောင်နေလို့ အလွတ်တောင် ရတော့မယ်. အဓိပ္ပါယ်က ဘာတွေ မှန်းကို မသိဘူး ။ အခုမှ သိခွင့်ရလိုက်တော့ ကျေးဇူးပဲ နော်... ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို မေးမေးနေကြတာ..Tsaminamina zangalewa ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုလေ. ဘာမှန်းမသိတော့ မသိဘူးပဲ ပြောပြောနေရတာ. အခုတော့ ပြောလို့ရပြီ.. ကျေးဇူးနော်..
U r the Best .......
ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ အင်္ဂလန်ကတော့ ဖင်လန်ပြန်သွားပြီလေ
အော်.......စပိန်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ Waka Waka ဆိုနိုင်တာပေါ့..။
2း43 မှာ အဆိုတော်ရဲ့ဘယ်ဘက်၃ယောက်မြောက်နဲ့ ၅ယောက်မြောက် က
မြန်မာမိန်းခလေး၂ ယောက်တွေ့တယ် .တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည် က အေးအေး တဲ့ ...
waka waka အေးအေးလို့ တောင်ဆိုသွားသေးတယ်နော်...
မြန်မာမလေး တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်က အေးအေးဆိုရင်
နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်က အိုးအိုး ဖြစ်မယ်နော်...
မိုက်တယ်.. တို့မြန်မာတွေရဲ့ နံမည် ကမ္ဘာ့ဖလား သီချင်းထဲပါခွင့်ရတာ ၀မ်းသာလိုက်တား)း)
လာသွားပါပြီ မမချောရော ၀ါးကပ်ရော ၀ါးက ရော Waka ရော အကုန်လုံး သိသွားပါတယ်
ချောညီမက ရှာရှာဖွေဖွေလေးတွေ တင်ပေးတတ်တယ် တကယ်...မသိပါဘူးဟယ် တို့က ခုမှ WC-2010 အတွက် စပ်တာ မှတ်နေတာ...တချို့စာသားလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ထားတာလေးပဲ ကွဲတာနော် :) 10Q :P
ချောရော ဝါကာ ဝါကာ Waka Waka အကကို က တတ်သလားဗျာ-
ရှကီယာ ကတာကြည့်ပြီး နေ့တိုင်းတော့ ကျင့်နေတာဘဲ...
ခုချိန်ထိတော့ ကတတ်သေးဘူး..း)
မချောရေ... ၀ါက သီချင်းသမိုင်းဖြစ်စဉ်ကို တင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုလုံးကို နှစ်ခေါက်စီဖွင့်ပြီး နားထောင်ကြည့်ရှုသွားပါတယ်။ တက်ကြွမှုအပြည့်ပါတဲ့ သီချင်းလေးပါဘဲ။
အဲ့လိုလားတဲ့ .. ချောကိုကျေးဇူးတင်တယ် သမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့ရှင်းပြလို့လေ ။ ဒီသီချင်းကို သိပ်ကြိုက်တာပဲ ။ သီချင်းလေးကော အကလေးကော ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ။ မြူးမြူးလေးနဲ့ .. ကြည့်နေတဲ့သူကို စိတ်ပျော်ရွှင်စေတယ်လေ
ဘောလုံးပွဲကို လုံးဝစိတ်မ၀င်စားပေမယ့်.......သီချင်းတွေနားထောင်ရင်း......ထ,ကချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ်......။ နုတ်ဘွတ်ခ်အစုတ်လေးတက်နင်းမိသွားမှာစိုးလို့......ဟိဟိ.....
ဟဟဟ....ဦးထုပ်နဲ့ ဗိုက်ပူပူ ဖင်ကောက်ကောက် မျက်နှာမှာဆေးချယ်ထားတဲ့လူကြီးကို သဘောကျသွားလို့ ရင်တွေတောင်ခုန်သွားတယ် :D
ငါ့အစ်မက အကကျင့်နေတာ ရှာကီရာလိုတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလူကြီးလိုကဖို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ညီမလေးက သီချင်းဆိုပေးမယ် “၀ါကာ ၀ါကာ အိုးအိုး” လို့လေ (အေးအေးက သီချင်းထဲမှာ ပါသွားပြီလေး)))
စပိန်အသင်းကို အားပေးသူချင်းမို့ လေးစားပါ၏။ Waka Waka ရဲ့ဇစ်မြစ်ကို အခုမှတကယ်သိတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှာကီရာ နောက်ကောက်ကျမှာတော့ မြင်ယောင်နေသေး...ဟေး..ဟေး..။
ချောတစ်ယောက် အကလေ့ကျင့်တုန်း ဒဏ်ကြေဆေး ဘယ်နှကြိမ်လူးပြီးပြီလဲ...?
ဒီပို့စ်လေးကိုလည်းကြိုက်၊ သီချင်းလေးကိုလည်းကြိုက်၊ အောက်က comment တွေနဲ့ မချောရဲ့ reply တွေကိုလည်းကြိုက်။ ပျော်သွားတာပဲ။
I love waka waka, shakira and chaw.
Do more and keep going on Ma Chaw.
Waka Waka ha ha
hero lay said...
ံHi.. Ah Ma .. I've visited to this site and i like your posts. I gotalot of knowledge from your blog. I thank you so much. Be Happy ...
အဲ့သီချင်းကတော့ အရမ်းမြူးပဲနော် ..း))
ကျေးဇူးအစ်မရေ ... နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်တော့ ၀ါကာဝါကာ နဲ့ တန်းတိုးတာပဲ ... ဒီပို့စ်အတွက် မမန့် ပဲ မနေနိုင်လို့ မန့်ခဲ့ပြီ။ ဗဟုသုတ တော်တော်ရလိုက်လို့ ကျေးဇူးပါ။
စာသားလေးထည့်ပေးတာ တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။သီချင်းကြားကတည်းက စာသားရချင်နေတာ။
Germany lit twar pee chaw yae.... :(
Grai chyeju kaba sai yaw!
kong tal phyar
ချော က တော်တော် ၀ါသနာပါတာပဲနော်